Galaxy Galaxy S10 cusub ee noo cadaadinaya inaan aragno iPhone - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM »Maxaa cusub ee Galaxy S10 in ay nagu dhiirigaliso in aan ku aragno iPhone
Galaxy Galaxy S10 cusub ayuu nagu soo riixayaa si aan u aragno iPhone
Ka dib markii Galaxy S9 oo aan wax badan isbeddelin marka la barbardhigo horaantii hore, Samsung ayaa horumarineysa qaabka ay u leedahay qaabka loo yaqaan 'flagship model'. Halkii ay ka baari lahaayeen Galaxy S10 - waa telefoonka ugu fiican, adigu waad ku mahadsantihiin - halkan waxaa ah casriyeynyo nagu soo jiitay fiirsigeena oo waxaan jeclaan lahayn inaan aragno muuqaalka iPhone.
Qalab-ballaaran oo gees-gaab ah
Abaalmarinta ugu weyn ee Galaxy S10 waa kamaradiisu. Iyadoo S9 lahaa hal module ah wuu ugu dambaysiiyey (on module labanlaab S9 +) waa isku xigta saddex qaybood oo qurxin dambe ee S10 iyo S10 +.
Ma aha wax yar oo qosol ah, isku dhufashada dareerayaasha / muraayadaha marka Google Pixel muujinayo in ay suurtagal tahay in si ay u sameeyaan mawduucyo oo leh qalab hal (iyo qiyaas wanaagsan oo AI ah)? Well no no.
Haddii rata iyo xataa dhaqanka kartaan tareenka ka dhanka ah string this of gool - saldhigga meesha aad gelin farahaaga - ay badnaanta leedahay milgadaa la ekaan. Sababtoo ah Galaxy S10 wuxuu leeyahay saddex qaybood oo ah muraayado badan oo kala duwan:
Module caadiga ah: 26 mm, furitaanka f / 1,5 ilaa 2,4, 12 MP Sensor
2x moddka zoom: 52 mm, f / 2,4, 12 MP Sensor
Xeerka xajmiga ee ballaaran: 13 mm, f / 2,2, 16 MP Sensor
Waa aalladda gashto ballaaran-xagal, taas oo qabsatay stage ballaaran, taas oo cusub. Waa inaan sheegaa ka hor intaanan tijaabin, ma fileyn in aan u isticmaalo inta badan laba toddobaad isticmaalka. Waxaa jira saamaynta cibaaro shaki ciyaaraa - aad og tahay, saamaynta ka dhigaysa waxaad isticmaali Animojis dhowr daqiiqo ka hor inta aadan ... hilmaansiiyey - laakiin ma aha oo kaliya. Qalabkani ma aha qalab.
iPhone XS - qaababka caadiga ah
Xaglo-ballaaran oo ballaaran ayaa siinaya fursado wax-soo-saarka cusub iyo xitaa si fudud. Ma aha muuqaal ku filan si loo sawiro goobta dhamaystiran? Hop, waxaan u jeestaa bartilmaameedka weyn ee xadhigga shaashadda. Tusaalooyin hoos ku qoran oo leh qori iyo riwaayad.
Saddexda farsamadood ee Galaxy S10: ultra-ballaaran, xajmeed iyo xaafad 2x.
Aragtidani waxay sidoo kale ku habboon tahay in ay ka tarjumto heerkulka muuqaalka. Waxaa jira dabeecado badan oo iPhone ah oo loogu talagalay in ka badan ama ka yar panoramas caadiga ah (Google Street View waa mid), laakiin halkan waa hal tallaal ayaa ku filan si loo helo tallaal cajiib ah.
Saddexda taleefoon ee Galaxy S10
Tani module ballaaran-xagal aalladda aan waa qumman yahay, waxa abuuraa buuq badan digital ee bay'ada iyo dhalanrog mugdi ah waxaa muhiim ah (ikhtiyaar ay si toos ah loo yareeyo, waxa aan la karti on sawirada kor ku xusan) laakiin dhab ahaantii wuxuu leeyahay mudnaanta hadda jirta. Anigu waxaan si dhakhso ah u isticmaalay inaan yeesho doorashadan seddexaad taas oo, waan ogahay, waan maqnaan doonaa mararka qaarkood ee iPhone. Xoogsatada sawirqaade, waa muraayad yar oo yar si loo hagaajiyo casriga casriga ah. Wixii ah neophytes, kuwani waa fursado cusub oo cusub.
Dib uga noqoshada lacagta
Galaxy S10 waxay ugu dambeyntii ku qancisay kuwa ka soo horjeeda inay lacag ku rogaan. Sababtoo ah haa, waxaa jira sababo aan loo jecleyn nooca dib ujajinta: way ka yar tahay lacagta lagu xiro; marwalba waxay ubaahan tahay in aad fiilo ku xirto meel; oo waxay ku soo rogtaa gadaal dib u qurxin ka badan biraha.
cibaaro ah ee labiska Galaxy S10 siinayaa tahay awooddiisa ah inuu laftiisa xeedho wireless noqday. Haddii aad ilowday cable ku xiran aad watch ama headset Bluetooth, waxa macno ah ma, oo wuxuu ku riday on dambe ee casriga ah dhowr daqiiqo oo ay ka heli doontaa casiir ah. Halkan waxaa ugu dambeyntii kufsiga dhabta ah ee dhabta ah!
Sababaha dhabta ah ee isticmaalka tamarta, adeegga Wireless PowerShare uma shaqeynayo si joogto ah, waa in loo adeegsado qaybta gaaban ee guddiga gaaban. Fariin ay weheliyaan sawir sax ah intaad ku xiran tahay inaad dhex gashid xarunta dhexe.
Ma jirto halis qalad, marka lagu daro screen ama siyaada LED in nalalka, an LED on dambe ee Galaxy S10 iyo beep ah ayaa xaqiijiyay hadda ku amraya.
Hantidhowrka Wireless PowerShare wuxuu u baahan yahay ugu yaraan 30% batari wuxuuna si toos ah u damin doonaa sanadaha 30 haddii aan wax helin.
Dareemkan dib u celinta ma beddelo isticmaalka batteriga dibadda inta lagu jiro dhammaadka wiiglaha, laakiin waxay ku dhowdahay balanqaad in had iyo jeer uu leeyahay qalabka shaqada. Waxay sidoo kale dhibaato ka geysan kartaa dib u dhejinta mid ka mid ah casriga kale ee casriga ah. Xaqiiqdii, badeecooyinka Qi-ga badankood waxaa lagu kabi karaa sidoo kale. Waxay la shaqaysay qof kasta oo aan isku daynay: AirPods Wireless Case, iPhone XS iyo Case Smart Battery for iPhone XS. Waxaa jira hal ka reeban, Apple Watch, taas oo aan si buuxda ugu habboonayn nambarka Qi.
Soo saaraha Kuuriya ma aysan ka dhigin madadaalo ah iPhone X, laakiin maxay u bixineysaa qaybkeeda si ay u xajiso baaxadda shaashadda? On Galaxy S10, waa god. Shaandhada OLED waxaa lagu feeray si sax ah oo loo ogolaado kamaradda hore inay muuqato (S10 + wuxuu leeyahay dalool ballaaran si uu uqaado laba lenses).
Muuqaalka sawirka ah ee caadiga ah waa dhammaan kuwa madow ee geeska sare, sidaas darteed xumbadaasi waxay ku dhowdahay inaysan muuqan. Si kastaba ha ahaatee, kan hooseeya, maahan daruuri in la illoobo, si dhakhso ah uma fiirsan.
uruursanayey ee iPhone waa Oo weliba waxaad illowdaa muddo ka dib, laakiin marka aad saaray qalab Apple iyo Samsung dhinaca by dhinaca, xigmada leh ee godka marka la barbardhigo cad.
Waa in aynaan lumin aragtida xaqiiqda ah in haddii iPhone uu leeyahay darajo caan ah, waa sababtoo ah waxa uu leeyahay taxane mas'uuliyado ah oo ka mid ah aqoonsiga Face. Galaxy S10 ma laha tiknoolajiyad aqoonsi oo hormarsan.
Ka dibna isdhexgalka xajmiga Galaxy S10 wuxuu ka baxayaa wax la doonayo. Android dhaqmo ahaantii sida haddii ay jiraan kuwo uruursanayey ee bartamaha, waxaa jira saddex walxood oo ka mid ah barnaamijyadooda ilaa dhankiisa bidix iyo bar wargelinta, inkasta oo ay jirto qolka si gelin badan (ka icon •···· ma jiraa in la ogaado in ogeysiisyada kale ay joogaan).
Faahfaahinta kale ee cajiibka ah, fooridani ma aha mid dhererkiisu ku badan yahay baraha ogeysiisyada. Iyadoo qaybta kor ku xusan ay ka soo wareegtay dhammaadka taleefanka, saldhigga ayaa taabanaya hoosta bararka. Waa wax la yaab leh, waan qirayaa, laakiin waa xishood. Nasiib-darradani ma muuqato meel kasta. Nasiib wanaag, codsiyadu waxay leeyihiin rabsho badan oo ay ku yareeyaan bararka ogaysiisyada ay ku xiran yihiin.
Galaxy S10 waxay leedahay muuqaal ah in dadka isticmaala ee iOS ay ku caansan yihiin Apple sanado: Habeen habeen ah. Taabashada on icon ah ee guddiga gaaban, habka nidaamka isbedelka ka soo caddaan ilaa madow. Habkani wuxuu sidoo kale si toos ah u bilaabi karaa qoraxda ama waqti gacanta lagu soo xushay.
Intaa waxaa dheer in ay xubno nidaamka interface, sida farriimaha ama keyboard, ee Samsung Apps ugu muhiimsan ee ay qaataan asalka gebi ahaanba madow ah (taas oo waxa ay taasi si fiican u shaashadda OLED ah): Settings, Phone, Messages, Email, files My, Calendar , Xiriirrada ...
Boggaga Samsung ayaa xitaa khafiifinaya bogagga internetka. Waxa uu si buuxda u sameeyaa suugaankiisa. Faa'iidada waa in ay la shaqeyso website kasta. Khasaaradu waa tan aan ka duwaneyn habka 12.1 Safari Mac taas oo ku tiirsan shaqada hawsha tifaftirayaasha ee goobaha, natiijadu waxay noqon kartaa mid aan rasmi ahayn, xitaa haddii aanan xusin wax dhibaato ah.
Habka Habeenku waa yareynayaa indhahayga marka aan daawado Galaxy S10 habeenkii habeenkii qolka qafiifka ah. Waxaan ka helaa wax badan oo ka waxtar badan habka Habeenkii Habeenkii Habeenkii.
Hase yeeshee, waxay leedahay xadka ugu muhiimsan. Maadaama ay tani tahay shaqo ka mid ah Samsung ku dul dhejin, oo ma ahan qaab muuqaal ah ee Android, muuqaalkani ma shaqeynayo dhammaan codsiyada. Ma madoobeyn karto barnaamijka saddexaad ee xisbiga, ama dhaqaajiya habkeeda habeenkii haddii uu leeyahay. Waxay noqon kartaa Android Q taas oo guud ahaan habaynaya qaabka mugdiga ah ee dhammaan barnaamijyada ku yaala barxadda.
Intii lagu gudbi lahaa, waa in aan ku salaamaa caalamka adduunka oo dhan, One UI. Sannado badan ka dib, soo-saaraha ayaa ugu dambeyntii ku guuleystay inuu abuuro qurux badan oo lagu farxo oo loo isticmaalo iyo xitaa wax ku ool ah marka loo eego Google Android qaybo ka mid ah.
Marka lagu daro habka habeenkii, hal UI ayaa si gaar ah u keenaya interface kaas oo sahlan in la isticmaalo hal gacan. Liistada fariimaha, goobaha ama xidhiidhada waxay ka bilaabmaan bartamaha shaashadda iyo badhanka muhiimka ah waxay ku yaalaan xagga hoose ee shaashadda.
Adigoo si fudud u fiirsanaya shaashooyinkaan, waxaan ka fakari karnaa in booska lumay, laakiin ma aha dareenka aan isticmaalo. Haddii aan doonayaa in aan arko SMS ugu da'da weyn, waa run waxa ay qaadataa qorniin duudduuban oo aan ma uu samayn on macruufka ah, laakiin ugu dambeeyey posts, kuwa aan ahay u badan tahay in ay ka jawaabaan, waxay u badan la heli karo in aan suulka .
Waxaa jira hal sawir oo maqan oo liiskan cusub ee Galaxy S10 waa sawirka faraha ee isku dhafan ee shaashadda. Howlgalku wuxuu ahaa mid aad u qaldan intii lagu jiray wiiggii hore iyo badhkii isticmaalka. Had iyo jeer waxaan ku khasbanaaday inaan dib ugu noqdo labo ama seddex jeer si aan u helo shaashadayda la aqoonsan yahay. Tani waa ka yar kiiska hadda - Anigu garan maayo hadduu kanu sabab u leedahay in aan helay "xaq" jidkii aan farta ama shidma laftiisa saaray - laakiin waa ka yar si degdeg ah oo sax ah sida Aqoonta Waaweyn
Akhristaha fingerprint ka yar shaashadda OnePlus 6T, kaas oo isticmaala tiknoolajiyo kala duwan (dareemaha indhaha oo ka dhan ah dareenka ultrasonic), ma ii keenin dhibaatooyinkaas. Haddii uu ka yar yahay maskax (waa inuu iftiimiyaa faraha si uu u shaqeeyo), wuxuu sidoo kale ahaa mid waxtar badan oo bilawga ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaan doorbidaa aqoonsiga Face, oo lagu kalsoonaan karo oo hufan.
Dhamaadka, dhammaan faa'iidooyinka, waa inaad ka saarto iPadkaaga Galaxy S10? Dhab ahaan ma aha, haddii aad rabto inaad ka beddelato macruufka Android ilaa Android. Sidaas, Galaxy S10 waa shaki la'aan mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan Android ee suuqa - waa mid ka mid ah kuwa ugu qaalisan sidoo kale 909 €, xitaa haddii qiimaha si dhakhso ah u dhaco.
Laakiin waa arrin kaliya oo bilo ah ka hor inta aysan ku guuleysan iPhone-ka cusub. Muraayadaha xawaaraha ah ee ballaaran? Waxay noqon kartaa qayb ka mid ah kamarad seddex kamida kuwaas oo qalab cusub samayn doona bisha Sebtembar. Dib-u-dallacsiinta? Jiilka xiga ee iPhone ayaa la qalabayn lahaa Beteriyada waaweyn si loo tixgeliyo isticmaalka dheeraadka ah. Habka Habeenka? Ugu danbeyntii wuu iman lahaa ee 13 iOS. Koodhka yaryar? Apple iyo la-hawlgalayaasheeda halkaas ka shaqeyn lahaa, inkastoo laga yaabo inaanay noqon sanadkan.
Horaantii hore ee Samsung ma aha wax aan caadi ahayn. Galaxy S ayaa ahaa mid u adkeysanaya, oo ku shaqeynaya cabirka wireless waxaana lagu qalabeeyey sanado badan oo ka hor inta aaney iPhone ku jirin, taas oo ay ku jirto (taa soo noqnoqonaysa, iPhone wuxuu ahaa kii ugu horeeyay ee ku raaxaysta dareeraha latalinta lagu kalsoonaan karo iyo processor 64, iyo kuwo kale).
Waa maxay cusub ee ku filan inay tahay Samsung hadda ka hor shirkadaha Chinese, Huawei hogaanka. ah Mate 20 Pro Bishii October ee sannadkii la soo dhaafay lens-ultra-ballaaran xagal-wareeg ah, ganaax celin iyo dareenka faraha ee shaashadda. Sida laga soo xigtay Samsung Mobile, Innagu waa furaha si uu u noqdo hoggaamiyaha adduunka. Wajahay Huawei in si furan oo doonaya in meesha ugu horeysa, Samsung yeelan doonaan in ay sii badnayeen sannadaha soo socda - iyo Apple ayaa sidoo kale waqti isku mid ah.
Maqaalkani waxa uu appeared first on: https: //www.igen.fr/android/2019/04/les-nouveautes-du-galaxy-s10-quil-nous-presse-de-voir-dans-liphone-107486